Date: 30 août 2017 - 19:49
IZaho ry reto mba mangataka ny avis anareo momba ny CNAM (Centre Nationale des Arts et des Metiers) filière BTP. Olona efa miasa aho mantsy fa maniry ny hamerina fianarina momba ny BTP. Noho ny fotoana sy ny asa nefa dia tsy afaka intsony ny ianatra andakilasy fa tsimaintsy à distance na par correspondance ka ny CNAM no itako mahafeno ireo fepetra ireo. Mba tiko ho heno anefa ny lazany alohan'ny idirana ao.
Manaraka izany,iza akotran'ny CNAM no toeram-pianarana manome io formation momba ny BTP io ka à distance na par correspondance.
Date: 03 septembre 2017 - 15:19
raha efa miasa ve tsy ny mampianatra tena no mety, efa fantatrao ny ilainao dia manitatra fotsiny , sa hoe mila diploma ? be dia be ny formation BTP à distance , jereo ao @ google, fa ny CNAM no anisany manome diploma sy formation tena tsara ,
Date: 04 septembre 2017 - 14:48
Izaho efa miasa no manao cnam, filière hafa no ataoko fa tsy btp, mandehana makany mihitsy maka info fa adéquate ho an'ny olona efa miasa ilay fianarana, marihako fa ilay fianarana fa tsy ny calendrier etc...
diplôme d'état français raha mahavita fa courage, la vie nous réserve des surprises